Manchester United iyo Arsenal oo isku haysta saxiixa laacib ka tirsan kooxda Lille – Gool FM
(Yurub) 14 Maajo 2019. Waxaa la soo warinayaa in kooxaha reer England ee Manchester United iyo Arsenal ay bartilmaameedsanayaan laacibka Pepe ee ka tirsan Naadiga Lille.
Jariiradda The Mirror ayaa daabacday in kooxda kubadda cagta Manchester United ay qorsheynayso inay 45 milyan oo gini oo u dhiganta 58 milyan oo dollar ku soo qaadato ciyaaryahan Nicolas Pepe.
Laacibkan garabka ka ciyaara ee Nicolas Pepe ayaa bandhig aan caadi ahayn ka sameeyey xilli ciyaareedkan naadiga reer France ee Lille.
Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay in Man United ay tartan ku aaddan saxiixa laacibkan kala kulmi doonto kooxda Arsenal oo dhankeeda ka doonaysa Nicolas Pepe, laakiin kooxda ka arrimisa garoonka Old Traffrod ayaa kalsooni ku qabta inay Gunners ku garaaci doonto saxiixa xiddigan.
Dhinaca kale kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaa xiisaynaysa saxiixa laacibkan garabka ka dheela ee Nicolas Pepe, waxaana ay doonaysaa inay la soo wareegto marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan.